Soo dejisan AdwCleaner 8.0.9.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: AdwCleaner
AdwCleaner – aalad inay ka soo saarto adware ah waxyeello. AdwCleaner wax ku ool ah ka saaraysaa daro ah advertising, toolbars browser iyo adeegyada kala duwan ama software, in loo xiraa si madax banaan. software The baaritaanku your computer ee modules la rabin ama lagu daro iyo bandhigayaa natiijada scan ee isha ku habboon. AdwCleaner u saamaxaaya in ay doortaan software ka shakiyo madax bannaan oo ka dib markii habka nadiifinta si aad u eegto warbixinta faahfaahsan ee file qoraal ah. Sidoo kale software ah waa awoodaa in la ogaado oo ka saar afduubka browser in la beddelo page guriga hadda ama raadin engine of browser oo aan ogolaansho user. AdwCleaner leedahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Removal of furin la natiijooyinka ay shaqada
Nadiifinta of adeegyada diiwaanka iyo nidaamka
Removal of bogagga guriga afduubay iyo matoorada search
Faallo ku saabsan AdwCleaner
AdwCleaner Xirfadaha la xiriira